२० मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा ! सेल्फी प्रेमीका लागि विवोले ल्यायो नयाँ फोन - Ratopati
२० मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा ! सेल्फी प्रेमीका लागि विवोले ल्यायो नयाँ फोन
असोज २ | एजेन्सी
चीनियाँ स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनी वीवोले सेल्फी प्रेमीका लागि वीवो वीफाइभ स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । यो फोनको मुख्य विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा यसमा २० मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ । कम्पनीको दाबी अनुसार यो संसारको पहिलो फोन हो नसमा २० मेगापिक्सेलको क्यामरा दिइएको छ ।
वीवोका अनुसार उनीहरुको यो नयाँ स्मार्टफोन प्रविधि र डिजाइनको उत्कृष्ट संगम हो । यो फोनमा १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा छ । वीवोले फोनको मूल्य १७ हजार ९ सय ८० भारु तोकेको छ । फोनको बिक्रि नोभेम्बरको २६ तारिखदेखि हुनेछ ।
यसका साथै वीवोमा ५.५ इन्चको एचडी डिस्प्ले हो जसको रिजोलुसन 1280×720 को छ । यसका साथै यसमा दिइएको २.५० कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास दिइएको छ भने यसमा ६४ बिटको ओक्टाकोर प्रोसेसर राखिएको छ । यो ४ जीबी र्यामले संचालित हुन्छ । फोनको इन्टरनल मेमोरी ३२ जीबीको छ जसलाई माइक्रो एसडी कार्डमार्फत १२८ जीबीसम्म बढाउन सकिन्छ । साथै फोनमा ३००० एमएएचको ब्याट्रि पनि दिइएको छ ।